I-Apple isebenza kwi-Pro Display eya kubandakanya iprosesa ye-A13 | IPhone iindaba
I-Apple's Pro Display XDR yabothusa abantu bendawo kunye nabantu abangabaziyo ngelo xesha, enyanisweni yayiyinyama yokubona abo beza kwi-Keynote yokufota zombini isikrini kunye nenkxaso yayo, ethengiswa ngokwahlukeneyo kwaye ixabisa ngaphezulu kakhulu kunaye nabani na ongomnye ekufuneka ehlawule into enjalo. Nangona kunjalo, kufanelekile ukuba ibe nempumelelo xa iApple ibonakala ngathi inezimvo ngekamva kwezi ntlobo zeemveliso.
Inkampani yaseCupertino sele isebenza kuhlobo oluhlaziyiweyo lweApple Pro Display XDR eya kubandakanya iprosesa ye-A13 ngaphakathi, Zeziphi iindaba oza kuthi usinike zona?
Olu lwazi lupapashwe kutshanje liqela le 9to5Mac ibango lokuba ndiyifumene ngokuthe ngqo kwikhonkco lophuhliso lwemveliso. Okwangoku esi sikrini sikwinqanaba lokuqala kakhulu lophuhliso lwaso, kodwa ngenxa yezizathu ezingaziwa ngabahlalutyi, Igcina iprosesa ye-A13 Bionic evela kwinkampani yeCupertino, Kwaye sinokucinga ukuba iya kuba nento yokwenza nokuFunda komatshini okanye ubuGcisa bobuGcisa kwimiba ethile, nangona kunjalo, yeyiphi indawo esebenzayo enokuthi ivavanywe ngumsebenzi wethu wemihla ngemihla? Sinexesha elinzima lokucinga ukuba iApple ingafuna ukwenza njani kule meko.
Nangona kunjalo, sele uyazi intetho: U-Apple uyenzile kwakhona… Kwaye abahlalutyi bokuqala sele becinga ukuba le processor ye-A13 Bionic inokusetyenziswa njengohlobo lwe-eGPU ukuphucula ukusebenza komzobo womxholo onikelwayo okanye osetyenzisiweyo, ukhulula umthumeli kumthwalo womsebenzi, nokuba yiMac okanye iPro Pro. Siyakhumbula ukuba iApple Pro Display XDR yangoku inee-intshi ezingama-32 kunye nesisombululo se-6015 x 2284 eneempawu ze-HDR kunye nee-LED ezizimeleyo ezizimeleyo zokwenza oku kubek 'esweni enye yezona zibalaseleyo kwintengiso yokudala umxholo wee-audiovisual.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Apple isebenza kwi-Pro Display eya kubandakanya iprosesa ye-A13